Grab Marketing Promoter Staff (Male & Female)
Grab Myanmar Acquisition Team
Education Requirement : High School
Pay : Monthly Salary + Bonus + Overtime + Incentive Payment
Job description: Grab Myanmar မှ Acquisition Team အတွက် Grab ရဲ့ New Users စီးနှင်းသူ အသစ်တွေ
Target ပြည့်မှီအောင် ရှာပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
- Grab အကြောင်းကို အကျွမ်းတ၀င် သိရှိနားလည်သူများသာ ဦးစားပေးမည်။
- ပညာအရည် အချင်း အထက်တန်း အဆင့်မှ စတင်လျှောက်ထားလို့ရပါသည်.
- လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် ပညာရပ် တစ်ချို့  သင်ပေးမည်။
- အသက် ၃၀ အောက် ဖြစ်သူများသာ ဦးစားပေးမည်.
- မိမိကြိုးစားမှု ပေါ် မူတည် ပြီး မိမိလစာထက်ပိုရမည့် အခွင့်အရေးရှိမည်.
Grab Myanmar Acquisition Team မှ လိုအပ်သော Training တစ်ချို့  ပို့ချ ပေးမည် ဖြစ်သော ကြောင့် အတွေ့အကြုံ မရှိလည်း ၊ ပညာ အရည်အချင်း အတော်အသင့် အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ရုံ နှင့် စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူ မဆို လူကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ ၊ အောက်ပါ လင့်ခ် မှ ဖြစ်စေ စတင် လျောက်
ထား နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ် (Link) ကနေ Grab Myanmar Acquistion Team မှာ သင့်အနာဂတ်အလုပ်အကိုင်ကို
ရုံး လိပ်စာကတော့....Junction Square အနီး၊ Crystal tower7floor ၊ ကျွန်းတောလမ်း,ကမာရွက်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ မနက်၉နာရီမှညနေ ၅ နာရီ (တင်္နလာမှသောကြာနေ့)တွင်CV , NRC နှင့်တစ်ကွလူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျောက်ထားနိုင်ပါပြီးခင်ဗျာ
မှတ်ချက်။ ။ အဖွဲ့ နှင့်အတူ အလုပ်တွဲလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်....စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.
Target နဲ့ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ Stress များမယ်ဗျ....
အဲ့ဒါတွေအားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ပြီးရင်တော့ သင့်ကိုထိပ်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ တာဝန်ယူပါတယ်...
Local Firm (VAC) 300,000 to 300,000
Mottama Holdings Ltd Negotiable
Myanmar Institute of Business (MIB) Negotiable